ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံများ ဇာတ်လမ်းများ စုစည်းမှု ( Credit to Uploader ) ♥♥♥♥ | OKKALA STORE
ဇာတ်လမ်းအစက ကျွန်တော်မန္တလေးကိုသွားဖို့ လက်မှတ်ဝယ်ဖို့လျှာရှေပြီးဖုံးဆိုင်ကလူတွေကိုပြောလိုက်တယ်ဗျ
အဲတော့အဲဆိုင်ကလူတွေကသူတို့အသိလဲသွားဖို့ လတ်မှတ်ဝယ်ပေးပါပြောပြီးစော်တပွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်ဗျ။ လားလား….စော်ကအသားမဆိုဆလောက်လေညိုတယ်ဗျ ဂျောကတော့တောင့်သလားမမေးနဲ့ခါးသေးရင်ချီ
အိုးကောင်းအဖုတ်ကောင်းလုပ်ကောင်း မဲ့ပုံကြီးဗျ။ဒါနဲ့သူကပြောတယ်သူနဲ့သူ့မောင်လေးနဲ့လဲ မန္တလေးသွားဖို့လတ်မှတ်ဝယ်ပေးပါပေါ့ ကျွန်တော်လဲစော်ဆိုရင်ကူညီချင်လက်တို့လူစားမျိုးဆိုတော့ ဟုတ်ကဲ့မှတ်ပုံတင်ကောဆိုတော့ညနေသူအိမ်ကိုလာခဲ့ပါဆိုပြီး သူအိမ်လိပ်စာပေးတယ်။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲအားကျိုးမာန်တက်နဲ့ညနေ ၇ နာရီလောက်သူအိမ်ကိုချီတက်တာပေါ့။ ကျွန်တော်သူအိမ်အောက်ရောက်တော့ ခေါင်းလောင်းဆွဲလိုက်တော့သူကဆင်းလာတယ်ဗျ။ သူအောက်ကိုရောက်တော့ကျွန်တော့မှာအံတွေကြိတ်တံတွေးမျိုချနဲ့ ကိုယ်မြန်မာဝတ်စုံဆိုတာ ခန္ဓာအလှကို အထင်းသားမြင်စေပြီ ယောက်ျားတွေရဲ့ကာမစိတ်ကိုနိုးဆွမှူး အပေးနိုင်ဆုံးဝတ်စုံပါတကားဆိုပြီး ကိုယ်မြန်မာဝတ်ဆုံကိုဂုဏ်ယူမဆုံးတပြုံးပြုံး
စိတ်ထဲမှတ်နေတုံး ဖွားဖက်တော်ကလဲခေါင်းထောင်ထလာပြီး ထောက်ခံပါသည်ဆိုပြီး ခေါင်းညိမ့်ညိမ့်နေလို့မနဲ့ကိုပြန်အိပ်ထားခိုင်းလိုက်ရတယ်။ ဒါနဲ့သူကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုပြီးရှေ့ကသွားတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်ကမသိမသာနဲ့နောက်ကလိုက်ပြီသွားရည် တမြားမြားနဲ့သူအိုကြီးကိုငန်းပြီးနားထဲမှာ ”သန်မာထွားကျိုင်းတယ် ယဉ်တကိုမယ် ချစ်ဖို့အလွန်ကောင်းတယ်“ ဆိုတဲ့သီချင်းဟာသူကိုများစောင်းပြီဆိုထာလား လို့ထင်ပြီးချစ်ချင်စိတ်တွေထလာတယ်။ ဒါနဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရောက်တော့ သူကမှတ်ပုံတင်ပေးပြီအာလာပသလာပပြောကြတယ်။သူကကျွန်တော်ထက်ငယ်တယ်ဗျ။ စကားပြောပုံကကိုင်လာပုတ်လာပွတ်လားနဲ့ပေါ့အကိုင်ခံရတာကကျွန်တော်နော်။ ဒါနဲ့လက်မှတ်ဖြတ်ပြီသူအိမ်သွားပေးတယ်ကျွန်တော်လဲလတ်မှတ်ပေး၊ သွားမဲ့ရက်မှဘူတာမှာတွေ့မယ်ဆိုပြီးပြန်လာခဲ့တယ်ပေါ့
ပေါ့။ရထားကတော့ဒဂုံမန်း ၅ နာရီလား ၃း၃၀ ရထားလားမသိတော့ဘူး။ အဲတုံးကရထားအချိန်တွေမပြောင်းသေးတော့ရထားနဲ့သွားရတာသက်တာတော့
့ရထားပဲအားကိုရတယ်။ ဒါနဲ့သွားမဲ့ရက်ရောက်တော့ ကျွန်တော်ကအရင်ရောက်နေတာပေါ့ နောက်မှသူ့မောင်ရယ်သူရယ် နောက်သူ့ကိုလိုက်ပို့တဲ့ ၃၅ ၄၀ လောက်ရှိတဲ့စော် ကြီးရယ်ရောက်လာတယ်သူ့မောင်က ရနှစ် ၈နှစ်လောက်ပဲရှိအုံးမယ်။ အဲစော်ကြီးပါတော့သူကကျွန်တော်ကို မသိချင်ယောက်ဆောင်နေတယ် ကျွန်တော်လဲကိုယ်ခုံမှာ ကိုယ်ထိုင်နေလိုက်တယ်အဲတုံးက လူတယောက်လတ်မှတ်ဖြတ်ရင် ၃ဆောင်ပဲရတယ်ဗျ။ လတ်မှတ်ဖြတ်ရတာလဲတော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်။ ကျွန်တော်ဖြတ်ထားတဲ့ခုံက တတန်းတည် နှစ်ယောက်တွဲတခုံရယ်တယောက်ခုံတခုံရယ်။ ကျွန်တော်ကတော့တယောက်ခုံမှာပေါ့။ ရထားကြီးစထွက်တော့ သူကစကားလာပြောတယ် စားပြီးပြီလားခုနကလိုက်ပို့တာက သူအမပါဆိုပြီး ကျွန်တော်လဲအော်ဟုတ်ဟုတ်နဲ့ ကိုယ်ဟာကိုနေနေလိုက်တယ်။ အော်ပြောရအုံးမယ်အဲချိန်ကသင်္ကြန်ရောက်ဖို့ တရက်အလိုဗျလမ်းမှာရေတွေပက်လို့ မှန်တခါးတွေပိတ်ထားရတယ်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ခုံကလဲနောက်ဆုံးမှာဗျ။ ဒါနဲ့သူ့မောင်က ရေပက်တဲ့သူတွေကိုအထဲကနေကြည့်တော့ သူကမောင်လေးဟိုအကိုကြီးနားက မှန်ကကြည်တယ်ခုံလဲထိုင်လိုက်တဲ့ ကျွန်တော်လဲအားရ၀မ်းသာစွားနဲ့လဲပေးလိုက်တယ်။ တလမ်းလုံးကျွန်တော့်ကိုမုန့်ခွံကျွေးလိုက်ထမင်းခွံကျွေးလိုက်နဲ့ ကျွန်တော့်လက်မောင်းပေါ်မှီအိပ်လိုက်နဲ့ စုံတွဲတတွဲလိုကျွန်တော်ကိုဆက်ဆံတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်လဲပီတိတွေဖျာမနောခွေ့သဘောခွေ့ရင်း မန္တလေးရောက်ပါလေရော။ ဘူတာလဲရောက်ရော ကျွန်တော်လဲကိုယ်ဟာကိုသွားလိုက်တယ်။ မန္တလေးမှာတခါမှမတွေ့လိုက်ဘူး။ နောက်ရန်ကုန်ပြန်ရောပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲသူကိုနဲနဲမေ့သွားတယ်။ ဖုံးဆိုင်မှာတော့ဖုံးသွားဆက်တုံး။ ဒီလိုနဲ့နည်းနည်းကြာတော့ သူကိုဖုံးဆိုင်နားမှာပြန်တွေ့တယ် သူကအိမ်လာလည်ပါအုံးတဲ့။ ဒါနဲ့သူ့အိမ်သွားလည်တယ်။ စကားပြောလိုက်မုန်စားလိုက်နဲ့ပြန်လာ လိုက်တယ်သူနဲ့က တော်တော်တော့ခင်သွားတယ် နောက်တခေါက်သွားလည်တော့ ကျွန်တော်ကသူ့အိမ်ရှောမှာလဲပြီဂျာနယ်ဖတ်နေတုံး သူကကျွန်တော့်ဘေးမှာဝင်လဲပြီး သူခေါင်းနံနေလားဆိုပြီးသူ့ခေါင်းကို ကျွန်တော်နှာခေါင်းနားထိုးပေးတယ် ကျွန်တော်လဲဘယ်ရမလဲခေါင်းကိုနမ်းပြီး သူ့ကိုဖက်လိုက်တယ်။ အဲချိန်ကသူ့အိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူး။ ဖက်ပြီးသူ့ကျောကိုပွတ်ပေးလိုက်တယ်။ နောက်သူပါးကိုနမ်းလိုက်တယ်။ စစချင်းပဲသူကကျွန်တော့်ဖွားဖက်တော်ကို
ဘောင်းဘီအပြင်ကနေကိုင်နေတယ်။ ကျွန်တော်လဲဖီးတွေတက်လာပြီး သူနို့ကြီးကိုကိုင်လိုက်တယ်တင်းနေတာပဲဗျာ ကိုင်ရတာအရသာရှိသလားမမေးနဲ့နောက် ကျွန်တော်လက်ကသူဖင်တွေကိုကိုင်ပြီးပွတ်နေလိုက်တယ် သူကလဲကျွန်တော့လည်ပင်းကို နမ်းပြီးဘောင်းဘီကျယ်သီးကိုဖြုတ်ဇာတ်ကိုဖြုတ်ပြီး ကျွန်တော့်ဖွားဖက်တော်ကိုကိုင်ပြီးဂွင်းတိုက်ပေးနေတယ်။ ကောင်းလိုက်တာဗျားကြက်သီးတွေကိုထလို့်ကျွန်တော့်မှာဖြစ်နေတာ။ ကျွန်တော်လဲမနေနိုင်တော့ဘူးသူနှုတ်ခမ်းကိုစုတ်လိုက်တယ်။ သူကကျွန်တော့ပါးစပ်ထဲကို သူ့လျှာထိုးထဲ့ပြီးကျွန်တော့်ကိုကလိနေတာ ကျွန်တောမှာလူးလိမ်းနေတာပဲ။ နောက်သူကအခန်းထဲသွားရအောင်တဲ့။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဖက်လက်က သူ့ဖင်ကြီးကိုကိုင်ပြီးသူ့အခန်းထဲကိုသွားကြတယ်။ အခန်းထဲရောက်တော့အိမ်ရာပေါ်တက်ပြီးသူ့ကို kissing ဆွဲလိုက်တယ် နောက်သူအိင်္ကျီကိုချွတ်မယ်လုပ်တော့ပေးမချွတ်ဘူးဗျ။ ဒါနဲ့မရမကချွတ်လိုက်တယ်။အရင်ဆုံးသူ့ဘော်လီပေါ်လာတယ်ဗျ။ အဖြူရောင်လေးအောက်မှာတော့ ထိုးထွက်နေတဲ့ရင်နှစ်မွှာကကျွန်တော်ကိုစိမ်ခေါ်နေသလိုပဲဗျ။
သူကကျွန်တော့်ကိုပြုံးပြီတော့ကြည့်ပြီးသူဟာသူချွတ်လိုက်တယ်။ ပြုံးတာကတော့ဒီကောင်ဒါလေးတောင်မလုပ်တတ်ဘူးလားဆိုတဲ့အပြုံးပေါ့။ အားလားလားလှလိုက်တဲ့နို့ဗျာ။ ကြည့်ရတာနဲ့ကိုတင်နေတာပဲအောကားတွေထဲက ဆ်ာတွေနို့လောက်တော့မကြီးဘူး အဲလိုမျိုးပဲတင်းနေတာပဲ ကျွန်တော်လဲကိုင်လိုက်တယ်ကိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ နောက်ကျွန်တော်လဲသူနို့ကိုစို့လိုက်တယ်။ အစကတော့အသာလေးစို့တာ စို့လို့ကောင်းတာနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခတ်ကြမ်းကြမ်းစို့ လိုက်တယ်သူကလဲကျွန်တော့ဖွားဖက်တော်ကို ဂွင်းတိုက်နေတာ။ ကျွန်တော်လဲပါစပ်က သူနို့ကိုစို့ပြီးလက်ကသူအဖုတ်ကိုနှုက်လိုက်တယ် သူကကော့တက်လာတယ်။ သူကထမိန်စကတ်နဲ့ဗျအောက်မှာဘောင်းဘီတိုပါသေးတယ်။ မာန်ကတက်နေတာ့ဘာအရောင်မှန်းကိုမသိလိုက်ဘူးချွတ်လိုက်တယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ဘောင်းဘီကျွတ်နေပြီ အဲချိန်ဘယ်ချိန်ကျွတ်သွားမှန်းကိုမသိလိုက်ဘူး။ သူဘောင်းဘီချွတ်ပြီး သူအဖုတ်ကိုကိုင်လိုက်တယ်ဗျနူးညံနေတာပဲ သူအဖုတ်ကလဲအရည်တွေထွက်နေတယ်။ သူကကျွန်တော့်ခေါင်းကိုဆွဲပြီး kissing ပြန်ဆွဲတယ်ဗျသူလျှာနဲ့ကျွန်တော့်လျှာကိုကလိတယ်။ နောက်ကျွန်တော့်ကိုပက်လက်အိမ်ခိုင်းပြီအပေါ်ကနေ kissing ဆွဲ ပြီးအောက်ကိုဆင်းလာတယ်။ အရင်ဆုံးလည်ပင်းကိုဖွဖွလေးနမ်းတယ် ပြီးတော့လျှာနဲ့လျှက်ပြီးအောက်ကိုဆင်းတယ် ကျွန်တော့နို့သီးခေါင်းကိုအသာလေးကိုပြီး လျှာနဲ့ယက်တယ်ဗျကောင်းလိုက်တာဗျာ။ သူ့လက်ကတော့ကျွန်တော့ငပဲကို ကိုင်ပြီးပေါင်တွေကိုပွတ်ပွတ်ပေးနေတယ် ကျွန်တော်ကအောက်ကနေလူးလိမ့်နေတာပေါ့ဗျာ။ တဖ်ြည်းဖြည်းနဲ့ဗိုက်အောက်ကိုရောက်လာတယ် ကျွန်တော်လဲအမှုတ်ခံရတော့မယ် စိတ်ထဲမှာထင်နေတုံးအပေါ်ပြန်တက်လာတယ် ကျွန်တော်လဲမချင်မရဲဖြစ်ပြီး သူကိုအောက်မှာလဲခိုင်းပြီးပေါ်ကနေသူကို kissing ပြန်ဆွဲပြီးနို့ကိုကုန်စုတ်လိုက်တယ် ပြီးတော့ပြန်ထပြီး ကျွန်တော့ငပဲကိုသွင်းမယ် လုပ်တုံးသူအိမ်တခါးခေါက်တဲ့ အသံပေါ်လာတယ် ကျွန်တော်လဲခေါင်းနပန်းကြီးသွားပြီး ဘာလုပ်ရမလဲမသိတော့ဘူး သူကတော့အေးဆေးပဲအိင်္ကျီဝတ်ပြီး ကျွန်တော့်ကိုဘောင်းဘီဝတ်ပေးတယ်။ နောက်သူကအော်လိုက်သေးတယ်လာပြီတဲ့။ အားလုံးဝတ်ပြီးသွားတော့သူကအရှေ့မှာ အိပ်ချင်ဟန်ဆောင်နေဆိုလို့ အိမ်ရှေ့ပြေးပြီးအိမ်ချင်ဟန်ဆောင်နေလိုက်တယ်။
နောက်မှသူကတခါးဖွင့်လိုက်တယ်ဝင်လာတာလဲ စော်လေးတပွေပဲဗျ။ ကျွန်တော်ကခိုးကြည့်နေတာကိုး တော်တော်မိုက်တယ်အသားဖြူဖြူနဲ့ ရုပ်ကမိုက်တယ်ဘော်ဒီကတော့ဟိုစော်လောက်မမိုက်ဘူး။ ခဏနေတော့ကျွန်တော်လဲထလိုက်တယ် ဟိုဆော်ကကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ် သူ့သူငယ်ချင်းပါဆိုပြီကျွန်တော့်မှာဗျာ ဒုက္ခတွေကရောက်လို့အောက်ကကောင်ကိုမနည်းကိုထိန်းထားရတယ်။ ကျွန်တော့်စော်ကပြောတာ ခုတယောက်ကသူနဲ့ခဏနေနေတာတဲ့။ သေလိုက်ပါတော့လို့စိတ်ထဲကနေကျိန်ဆဲပြီး ကျိတ်မခဲနိုင်ဖြစ်ပြီးပြန်လာခဲ့ရတယ်……
မီးငယ်နှင့် ကျွန်တော်တို့ ၂ ယောက်
တီအင်တီ - အစ်ကိုနော်..အဲ့စော်ကြီးက..မမိုက်ဘူး..ကျွန်တော့်ကိုတောင်..၇၈မှာအ၇ုပ်ဝယ်ခိုင်းလို့..
မောင်လွမ်း - အမ်..ဘာအရုပ်ကြီးလဲ..
တီအင်တီ - ၄၀၀၀၀ လောက်တန်တဲ့အရုပ်ကြီးဗျ..ကျွန်တော်လည်းကြေးမြင့်လို့..ရှော်လိုက်တယ်..
မောင်လွမ်း - အေး..အခု..ငါ့ကိုလာကျူနေတယ်ကွ..
တီအင်တီ - ဟုတ်လား..ဘယ်လိုကျူနေတာတုန်း..
မောင်လွမ်း - ငါ့ကို..ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဒိတ်နေတယ်..ပြီးရင်..သွားချင်ရာသွားလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုဘဲ..
တီအင်တီ - ဒါဆို..အစ်ကို့သဘောက..
မောင်လွမ်း - မင်းကမမိုက်ဘူးလို့ပြောတော့..ငါစိတ်မပါဘူး..အင်း..ဒါပေမယ့်သွားကြည့်ချင်တယ်ကွ..
တီအင်တီ - ဒါဆိုလည်းသွားပေါ့..
မောင်လွမ်း - အာ..ငါတစ်ယောက်ထဲမသွားချင်ဘူး..မင်းလိုက်ခဲ့လေ...
တီအင်တီ - ကျွန်တော်ကရုံးမှာအစ်ကိုရ..
မောင်လွမ်း - ငါလာခေါ်မယ်ကွာ..
တီအင်တီ - ဒါဆိုလည်းလာခေါ်ဗျာ..လိုက်မယ်..ဒါနဲ့ဒီစော်က..ဘယ်ကချက်ပြီးဒိတ်တာလဲ..
မောင်လွမ်း - ၁၉လမ်းထိပ်ကxxxxxxxxxxxxxxxxxဆိုင်ဘာကလို့ပြောတယ်..
တီအင်တီ - သိတယ်အစ်ကို..လာခေါ်လိုက်ဗျာ..
တီအင်တီ - အစ်ကို..ဟိုစော်ဘဲဗျ..ကြည့်ရတာ..
မောင်လွမ်း - ဖြစ်နိုင်တယ်..ငါ့ကိုချိန်းတာ..စောင့်နေမယ်ဆိုတော့..ဒီမှာဘဲဖြစ်မှာ..
တီအင်တီ - အစ်ကိုတွေ့ပြီလား..ကျွန်တော်ပြောတာမလွန်ဘူးနော်..
မောင်လွမ်း - အေးကွ...ပုံကတော့..အင်း..
တီအင်တီ - ကဲ..အစ်ကို..ဘာဆက်လုပ်မှာလည်း..ချုပ်မှာလား
မောင်လွမ်း - တော်ပြီဆရာ..တော်ပြီ..လစ်စို့..
ကဲ - ပရိတ်သတ်ကြီးရေ..မီးငယ်ကိုသိရင်လက်ညှိုးထောင်..............။
ပြောရရင်တော့ ကျွန်တော်က ကျောင်းမနေခင်တည်း ဂွင်းတိုက်တတ်နေပြီဗျ။ ဒါပေမယ့် ဆော်ဖိုက်တာ တော့ နောက်ကျတယ်၊ ငယ်ငယ်တည်းက လက်တည့်စမ်းချင်တာ၊ ကျွန်တော်က နယ်မှာဖြစ်နေတာရယ်၊ ရုပ်ကလဲ သိပ်မလာ၊ ပိုက်ဆံကလည်း သိပ်မရှိဆိုတဲ့ အစားထဲက ဖြစ်နေလို့ဗျာ။ ကျွန်တော် ၁၃နှစ်မှာ စပြီး သုတ်ရည်ထွက်တယ်။ဒါပေမယ့် ဘယ်စော်မှ မစားခဲ့ရဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်အာသာဖြေပေါ့ဗျာ။ ဒီလိုနဲ့ ပထမဆုံး ဆော်အတွေ့အကြုံလေးကတော့
သူ့နာမည်က N လို့သာ မှတ်ထားပါတော့ဗျာ။ သူက ရန်ကုန်က ကျွန်တော်တို့နယ်မှာ ခဏလာနေတာ။ အသက်က ၁၄နှစ် ဖင်လုံး၊ နို့လုံးလေး၊ ကျွန်တော်က ဆယ်တန်းဖြေပြီး လက်ယားနေတဲ့အချိန်၊ သူက အိမ်ဘေးကို ပြောင်းလာတယ်၊ ကျွန်တော်တွေ့တွေ့ချင်း ရေရွတ်မိတာက၊ အားး လိုးချင်လိုက်တာလို့၊ အဲ့လောက်ထိပါဗျာ။ နောက်တော့ ရင်းနှီးလာတယ်။ ဟိုပုတ်ဒီပုတ်နဲ့ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ စပြီး နမ်းဖြစ်လိုက်တယ်။ အရဲ စွန့်ပြီး လုပ်ရတာပဲ၊ သူကလဲ ရယ်နေတယ်။ အဲ့ဒီဒီကကောင် အကန်းတက်တာပေါ့။ နောက်လစ်ရင်လစ်သလို ကစ်ဆင်ဆွဲတယ်၊ နို့ကိုင်တယ်၊ ဒီလိုနဲ့ တစ်ရက် ဘယ်သူမှ မရှိတုန်း ကျွန်တော့်အိမ်ကို ရောက်လာတယ်။ ကျွန်တော်လဲ ပွဲကြမ်းတာပေါ့။ သူကလဲတော်တော်ကြောက်တယ်ထင်တယ်၊ လက်ဝါးလေးနဲ့ သူ့ပစ္စည်းလေးကို အုပ်ထားတယ်။ ကျွန်တော်ကလဲ အတင်းခွတာ၊ ဒီလိုနဲ့ အထဲမဝင်နိုင်ဘူး သူ့ဖင်ကြားထဲမှာ လျောရင်းလျောရင်း နဲ့ ပြီးသွားတယ်ဗျာ။ ဒါနဲ့ ခနလက်လျော့လိုက်ရတယ်။
နောက်တစ်ကြိမ်သူ့အိမ်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိတဲ့အချိန် ဒီတစ်ခါတော့ အပီဆွဲပြီပေါ့၊ သူ့နို့လေးကို စစို့ ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ နို့ကိုပထမဆုံးစို့ဖူးတာပဲ၊ ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ ဒါပေမယ့် စလုပ်တဲ့ အချိန်မှာတော့ သူက တွန့်ကနဲဖြစ်ပြီးအော်တယ်။ နာတယ်ကိုကြီး ဘယ်လိုမှ မရဘူးတဲ့ ၊ အဲဒါနဲ့ ဟိုလှိမ့်ဒီလှိမ့်နဲ့ ပြီးသွားတာ။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော် ကျောင်းသွားတက်ရတော့မယ်။ အဆောင်သွားနေရတော့မှာ။ သူနဲ့ ခွဲရတော့မယ်။ မလုပ်ဖြစ်လိုက်ဘူး။ ကျွန်တော်အဆောင်ကပြန်လာချိန်မှာ သူကရန်ကုန်ပြန်သွားတာ၊ ဒီနေ့ထိ မတွေ့တော့ဘူး ဗျာ။
ကျွန်တော်စကြုံတာကတော့ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးခါစပေါ့ဗျာ၊ အဲနေ့ ကသူငယ်ချင်းတယောက်ကလာခေါ်တယ် မင်းစော်ကိုဖရီးဆွဲရမယ်တဲ့ လိုက်ခဲ့ဆိုတော့ ကိုယ်လည်းစိတ်ဝင်စားပြီး လိုက်သွားတယ်။ ဟိုရောက်တော့စော်ကတော့ မေ၇ာက်သေးဘူး အခြောက်တယောက် အိမ်ကိုသွားတာဗျ၊ သူက ကျွန်တော်ရယ် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကိုမေးတယ်။ မင်းတို့စော်ချချင်လားတဲ့ဒီကကောင်တွေကလည်းမချဘူးသေးဘူးဆိုတော့ စမ်းချင်နေတာကလည်း ငမ်းငမ်းတက် ဆိုတော့ ဆွဲမယ်ဆိုတော့ သူကပြောတယ် သူ့ ရှေ့ မှာဆွဲရမှာနော်တဲ့ ၊ ကျွန်တော်လည်း သုတ်ပိုးကငယ်ထိပ်ရောက်နေတော့ ဆွဲမယ်ပြောလိုက်ရော။ အဲမှာတင်သူက ဖုန်းဆက်ပြီး ကောင်မလေးကိုသွားခေါ်ခိုင်းတယ် ။ ကောင်မလေးက ၉တန်းပဲ ၇ှိသေးတယ် ကျောင်းအပြန်မှာသွားခေါ်လာတာပေါ့။ ကောင်မလေးက ဖုန်းဇယားလေးပဲဗျ ဒါပေမယ့်မထင်ရဘူးဗျာ တော်တော်လေးကိုချစ်စရာကောင်းတာဗျ အသားကလည်းဖြူဖြူလေး ကိုယ်လုံးလေးကလဲလှ စော်ကိုလည်းမြင်လိုက်ရကော မနေနိုင်တော့ဘူး အတင်းဆွဲချင်နေပြီ။ အဲဒါနဲ့အခြောက်က ကောင်မလေးကိုအခန်းထဲခေါ်သွားပြီး Feel ဆေးတွေတိုက်လိုက်တယ်ထင်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်တို့ တယောက်ချင်းကိုခေါ်တယ်...ကျွန်တော့်အလှည့်ေ၇ာက်တော့ ကျွန်တော်ဝင်သွားတော့ စော်လေးကဖီးတွေတက်ပြီးမှိန်းနေတယ်ဗျ အဲမှာစောက်ဖုတ်ဆိုတာကို စမြင်ဘူးတာဗျ မြင်လည်းမြင်ရော အောက်ကကောင်ကလည်း ငေါက်ကနဲ နေတာပဲ။ အဲမှာ အခြောက်က နေအုံးချက်ချင်းဆွဲလို့မရသေးဘူးတဲ့ ....ပြီးတော့စော်နဲ့ ကျွန်တော့်ကို Kissing ဆွဲခိုင်းရော ကျွန်တော်လည်းမဆွဲတတ်ဆွဲတတ်နဲ့ ဆွဲတာပေါ့။ ပြီးတော့ စော်ကကျွန်တော့်ကိုမှုတ်ပေးတာဗျာ အဲတုန်းကတော့ စော်ကလည်းမမှုတ်တတ်နဲ့ ဆိုတော့ နာတာပဲအဖတ်တင်တယ်ဗျာ..ပြီးတော့ကျွန်တော်စော်လေးကို ပက်လက်လှန်ခိုင်းလိုက်ပြီး စထည့်ရော စော်လေးကအော်လိုက်တာဗျာ.. အဲဒီ့ အော်သံလေးကိုအခုထိကြားယောင်နေသေးတယ်... အခြောက်ကလည်းဘာလုပ်နေတယ်မှတ်လဲ..ကျွန်တော်တို့ ၂ယောက် လုပ်နေတာကြည့်ပြီး..ဒီဘဲကဘေးကနေဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုနေဆိုပြီး ပြောပေးနေတာဗျ..ပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာကိုကြည့်ပြီး ဂွင်းထုနေတာဗျ..ကျွန်တော်ကတော့ သူဖာသာသူ ထုထုမထုထု မတတ်နိုင်တော့ဘူး စော်ကိုပဲစားမာန်ကတက်နေတော့..ရှက်လည်းမရှက်နိုင်ဘူး...သိပ်တော့မကြာပါဘူး ၅မိနစ်လောက်နေတော့ပြီးသွားတယ်...နောက်တော့ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းပါခေါ်ပြီး တူး ၀မ်းဆွဲတာဗျာ..အမေရိကန်ကားရိုက်နေတာကျနေတာပဲ။ ကျွန်တော်က အောက်ကနေပြီး ဖင်ကိုလိုးတယ် စော်ကအလယ်မှာကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက အပေါ်ကနေပြီး စောက်ဖုတ်ကိုလိုးတယ်။ကျွန်တော် ကတော့ ပထမဆုံး ရှင်ပြုတဲ့ နေ့မှာပဲ အမှုတ်လည်းခံ၇တယ် ဖင်ကိုလည်းလိုးရတယ် စောက်ဖုတ်ကိုလည်းလိုးရတယ်။အဲလိုပထမဆုံးလုပ်တဲ့ အခါမှာတင် အစုံလုပ်ရတဲံ့လူမျိုးက သိပ်ရှိမယ်မထင်ဘူးဗျ။ ဒီလိုနဲ့ စော်ကိုဝိုင်းဖုတ်လိုက်တာ ဘယ်၂ကြောင်းမှန်းလည်းမမှတ်မိတော့ဘူး..နောက်ဆုံးစော်ကအိမ်သာသွားချင်တာတောင်တွဲပြီးပို့ရတဲ့ အဆင့်ထိရောက်သွားတယ်ဗျာ..လုပ်တုန်းကတော့လုပ်ပြီးမှ..ပြီးမှသနားလိုက်တာဗျာစော်လေးကို..စော်ကနောက်ဆုံးမခံနိုင်တော့ဘူးပြောမှပြန်လွှတ်လိုက်တာဗျ၊ ကျွန်တော့် ရဲ့ ပထမဆုံး အတွေ့ အကြုံကတော့အဲဒါပါပဲဗျာ ပြန်တော့အခြောက်ကမုန့်ဖိုးပေးလိုက်သေးတယ် ပိုက်ဆံလည်းရ ၀မ်းလည်းဝပဲ...အဲဒီအခြောက်ကတမျိုးဗျ သူ့ ကိုတော့ဘာမှမလုပ်ရဘူး...စော်ကိုပဲလုပ်တာကိုသူကထိုင်ကြည့်ပြီး ဂွင်းတိုက်နေတာ..အဲလိုအခြောက်မျိုးကတော့အယောက်၁၀၀လောက်တောင် ကျွှန်တော်တွေ့ လိုက်ချင်သေးတယ်။ ဒါလေးကတော့ တကယ်ဖြစ်ရပ်မှန်ပါဗျာ....
ကျွန်တော့်ဖြစ်ရပ်မှန်လေး၁ခုတင်ပေးမယ်ဗျာ... လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လလော်ကကပေါ့.... ကျွန်တေ်ာကချောင်းသာရောက်နေတဲ့အချိန် အဲမှာစော်၁ပွေကဖုန်းဆက်တယ်.... သိတယ်မလား... ချောင်းသာ မှာကဘာမှလုပ်စရာလဲမရှိဘူးဆိုတော့ အီတာပေါ့ဗျာ.. အဲမှာ အီရင်းနဲ့ sex ကိစ္စတွေပါပါလာတယ်ဗျ.... ပြောရင်းနဲ့ သူနဲ့ကျွန်တော် အလောက်းအစား ၁ ခုလုပ်မိတယ် သူကကျွန်တော့်ကို ၁၅ မိနစ်အတွင်း ရအောင် မြူဆွယ်မယ်တဲ့... ကျွန်တော် က လဲ ပြောတာပေါ့ ယော်ကျာ်းလေးပဲငြိမ်ခံရမလား.... ၁၅ မိနစ်လဲနည်းတာမှတ်လို. မဟုတ်ဘူးလားဗျာ.... ၁၅ မိနစ်အတွင်းမှ မရရင် ကျွန်တေ်ာ့စိတ်ကြိုက်နေပေးရမယ်လို. ... အဲတာနဲ့ ကျွန်တော်တို.လောင်းဖြစ်ကြတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ... ကျွန်တေ်ာရန်ကုန်ရောက်ရောက် ခြင်းပဲ စော်ကို ပုဇွန်တောင်မှာသွားခေါ်တယ်ဗျ... အားပါးပါး စော်က တကယ့်အလန်းဇယားကြီး... စကယ်တိုတိုကိုမှ စတော်က ဇကာပေါက်တွေနဲ့... ပြီးတော့ အကျီကလဲကျော ၁၀က်ပေါ်နေပြီ.. ကျောမှာက တက်တူးထိုးထားသေးတယ်... ပြောရင်းတောင် သတိရလာပြီ.... အဲတာနဲ့ ကျွန်တော်တို. hotel ထဲရောက်သွားတယ် ဆိုပါတော့ဗျာ... အဲမှာစတာပဲ... စစ ချင်းတော့ black ၁လုံးမှာပြီးသောက်နေကြတာ.... တယောက် ၂ ခွက်လောက်လဲဝင်ရော လူကကောင်းလာပြီလေ... ကျွန်တော်က စပြောလိုက်တယ် စတော့မလားဆိုတော့ သူ ကအင်းဆိုပြီ... ကျွန်တော့် အကျီတွေ ကိုချွတ်တယ်ဗျာ ပြီးတော့ ကျွန်တော့် ကို kissing ဆွဲတယ်ဗျာြ..... ပြီးတော့နှုတ်ခမ်းလေးတွေ က အောက်ဆင်းသွားပြီး... လည်ပင်း တစ်လျှောက်လျှာလေးနဲ့ တို.သွာတယ်...... ပြီးလဲပြီးရော all ကားတွေထဲက လို ကျွန်တေ်ာ့နို.တွေကိုလျာလေးနဲ့ ကလိတော့တာပဲ..... ပြီးတော့ အမိ က ငြိမ်မယ်ထင်နေလား... အဲလျာ က ဗိုက်ကနေ ဆီးစပ်ထိရောက်လာရော...
ပြီးလဲပြီးရော.... ကျွန်တေ်ာ့ boxer ကိုချွတ်ပြီး စုပ်တော့တာပဲ စုပ်တာမှ အဆုံးထိကို စုပ် တာဗျာ ကျွန်တော့်မှ မနည်းထိန်းထားရတယ်... နောက် အောက်က ဥလေး တွေကိုလဲ တခါတခါ လာစုပ်သေးတယ်.... ဆက်ပါဦးမည်....
ကျနော့မှာ သူငယ်ချင်းကောင်မလေးတွေ တော်တော်များများရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲက ၁ ယောက်ကတော့ ကျနော်နဲ့တော်တော်လေးကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆက်ဆံခဲ့ဖြစ်တယ်..မကြာခင်မှာပဲသူရည်းစားရသွားတယ်ဗျ..သူ့ရည်းစားကလည်း ကျနော်တို့သူငယ်ချင်းထဲကပါပဲ.ကျနော်နဲ့တော့သိပ်မရင်းနှီးဘူးဗျ.. ဒီလိုနဲ့ သူ့ရည်းစားနဲ့ တွဲပီး ၆ လလောက်ကြာလာခဲ့တယ်ပေါ့..တနေ့ ကျနော်တို့ ၃ ယောက်တွေ့ဖို့ချိန်းဖြစ်တယ်ဗျ.ဒိတ်ထားတဲ့နေရာကတော့ကန်တော်ကြီးထဲမှာပေါ့..ကျနော်ရယ် သဲသဲ ရယ် (သဲသဲ ဆိုတာကောင်မလေးနံမည်ပါ) က အရင်ရောက်နင့်တယ်. သူ့ဘဲကတော့ ထုံးစံအတိုင်းနောက်ကျနေတယ်.. ၁ နာရီလောက်စောင့်နေပီးဖုန်းဆက်ကြည့်လိုက်တော့ သူ့အဖိုးဆေးရုံး တက်ရမှာမို့လို့ နောက်နေ့မှ တွေ့မယ့်အကြောင်းဖုန်းဆက်တယ်ဗျ...ဒီလိုနဲ့ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်လည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူးပေါ့ဗျ..အဲ့ဒီမှာ ကျနော်က သဲသဲကိုမေးလိုက်တယ်.ငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲလို့ ... သူက မသိဘူးလေတဲ့ အကိုဘာလုပ်ချင်လဲတဲ့.. အဲ့ဒါနဲ့ကျနော်လည်း ဒါဆိုနင် ဘဲနဲ့ တွဲခဲ့ တဲ့ အကြောင်းတွေငါ့ကိုပြောပြဟာဆိုတော့..အင်းလေ ကောင်းပီိတဲ့..သူကသူ့ဘဲနဲ့ နမ်းတာတွေ..ဟိုတယ်သွားပီး လိုးတာတွေက အစ ပြောပြတယ်ဗျ..စော်က ပြောရင်းနဲ့ ဖီးတတ်လာလားမသိဘူး...သူ့မျက်လုံးတွေက အရောင်တွေတောက်လာတယ်ဗျ..အဲ့ဒါနဲ့ ညနေ ၃ နာရီလဲထိုးရော ..ကျနော်ကသူ့ကိုမေးလိုက်တယ် ငါတို့ပြန်မလားလို့..ဟာ အစောကြီးရှိသေးတယ်တဲ့ ..တတေရာရာ သွားမယ်လေတဲ့..အဲ့ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း..နောက်သလိုလိုနဲ့..အဲ့ဒါဆိုအဲယားကွန်း အခန်းနဲ့သွားနေရအောင်ဟာလို့..ပြောလိုက်တော့ ..သဲသဲက အင်းလေ ကောင်းသားပဲတဲ့..အပြင်မှာလဲ ပူတယ်တဲ့..ကျနော်လည်း ဘယ်ရလိုက်မလဲ ဟိုတယ်ကိုတန်းပီးမသွားတာပေါ့..စော်က ကျင့်သားရနေလို့လားမသိဘူး အေးဆေးပဲဗျ..ကျနော့် မှာပါတဲ့ ပိုက်ဆံမလောက်လို့ သူကတောင် ထုတ်ပေးလိုက်သေးတယ် ဟိုတယ်ခကို.. အခန်းထဲလဲ ရောက်ရော ကျနော့်ကိုရေချိုးခိုင်းတယ်ဗျ..ပီးတော့သူရေချိုးတယ်..ပီးတော့ကျနော့ကို မေးတယ် ကွန်ဒုံးပါလားတဲ့..ဘယ်ပါလိုက်မလဲဟ ငါကကြိုသိနေတာမှ မဟုတ်တာဆိုတော့..သူ့မှာပါတယ်တဲ့.ကဲဗျာကြည့်..ကနော်ထင်ပါတယ် သူ့အကောင်လာရင် သွားဖို့ ကြိုတင်ဆောင်ထားတာပဲဖြစ်မယ်.ဟီး..ကျနော်တို့စနမ်းကြတယ်..ကျနော့ရဲ့ညီလေးက တော့ မာတောင်နေပီ.စော်က ကျနော့ဘောင်းဘီကိုချွတ်ပီး ငပဲကိုလက်နဲ့ပွတ်ပီး ဆွပေးနေတယ်..ဟယ်..နဲတာကြီးမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့ ငါဘဲဟာက သေးသေးလေးတဲ့..ငါတော့ကြိုက်သွားပီဟာတဲ့..ပီးတော့ ကုံးပီး မှုတ်တော့တာပဲဗျို့..ကောင်းလိုက်တဲ့ ပလွေဗျာ..မှုတ်တဲ့ နေရာမှာတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတာ..ပီးတော့သူက ငါအပေါ်တက်မယ်ဟာတဲ့ ..စော်က တော်တော်စာနေပုံရတယ်...အပေါ်ကနေတတ်ပီးစောင့်တယ်..ကျနော်လည်းကောင်းလာတော့သူ့ကို ကုန်းခိုင်းလိုက်တယ်..နောက်ကနေ အပီဆွဲတာ..ပိပိလေးကလည်းကျပ်ကျပ်ကလေးဗျ.ညိုချောလေးကိုဗျ..စော်များ ကောင်းလွန်းလို့ြေ့ပာတောင်ယူရတယ်..ကောင်းလိုက်တာ အကို ရယ်တဲ့..ဖြစ်ချင်တော့ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ.သူ့ဘဲဆီက ဖုန်းလာတယ်..ကျနော်က ရပ်လိုက်တော့ ..သူက ဘာလို့ရပ်တာလဲဆက်လုပ်လေတဲ့..ကျနော်လည်းဆက်ဆောင့်တာပေါ့..သူဘဲဖုန်းကိုကောက်ကပီး..စကားပြောနေသေးတယ်ဗျာ..အံ့ရော..အား အင့် တွေလဲပါတယ်..သူပြောနေတာကတော့ ..သဲသဲ က အိမ်ခန်းထဲမှာတဲ..ကိုယ့်ကို သတိရလို့ တယောက်တည်းလုပ်နေတာတဲ့..ဟီး.....
ကဲ ဆက်ပြီ၊ ကျုပ်သူငယ်ချင်းဆော်ကတမျိုး၊ ဒိကောင်နဲ့ချိန်းရင်တစ်ယောက်ထဲမလာဘူး၊ သူ့သူငယ်ချင်းကိုခေါ်ခေါ်လာတယ်၊ ပြီးဒီကောင့်ကိုလဲကြိုပြောမထားဘူး၊ ငတိကလဲလက်တွေခြေတွေအငြိမ်နေတဲ့ကောင်မဟုတ်
ဒီတော့ရုပ်ရှင်ရုံထဲရောက်ရင်သူ့ဆော်ကအလယ်၊ သူ့ဆော်သူငယ်ချင်းကဟိုဘက်က၊ ဒီဘက်ကငတိ ဟိုနမ်းဒီနမ်း အပေါ်ကိုင်အောက် ဆော်ကဖီးတက် အသံတွေထွက် သူ့သူငယ်ချင်းခမျာ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ၊
တနေ့သားပေါ့ ဒီကောင်မြို့ထဲတစ်ယောက်ထဲရောက်နေတုံး သူ့ဆော်သူငယ်ချင်းနဲ့ဆုံပါလေရော၊ ပထမတော့ အတူတူအအေးဆိုင်ထိုင် နောက်ရုပ်ရှင်ရုံထဲရောက်ကြတာပေါ့၊ အဲဒီမှာဇာတ်လမ်းစတော့တာပဲ
နဂိုထဲကခြေလက်အငြိမ်နေတဲ့ကောင်နဲ့ သူများအကိုင်ခံရတာကြားထဲကအရည်ထွက်သူ၊ ဆုံလိုက်တော့ဖာတ်လမ်းပေါ့။
ပထမတော့ ပုခုံးလေးပေါ်လက်တင်ပြီးခပ်ဖွဖွဖက်ထားတယ် နောက်လက်လေးနဲ့ညှစ်လိုက် ဆံစလေးတွေပွတ်လိုက် နဲ့ကောင်မလေးခေါင်ကဒိကောင်ပုခုံးပေါ်မှီလာတယ်၊
အဲဒီတော့မှ မထိတထိနဲ့ နို့ကလေးညှစ်ကြည့် အေးဆေးတော့မှ ဘယ်ညာနှစ်လုံးကိုဆွဲလို့ နုတ်ခမ်တွေကိုတိုက်စစ်ဆင်ပါတော့တယ်၊ ပြီးမှတီရှပ်ကိုအသာမလို့နို့တွေကိုချေလိုက် ပွတ်လိုက် အတော်ကောင်းဆိုပဲ၊
နောက်တော့ခေါင်းအသာဝင်လို့ အပီစို့တာဆော်ကိုတရှီးရှီးနဲ့ကော့ကော့တတ်လာတာ ဒီကောင်လက် ထမီစအသာဆွဲလို့ ပင်တီအောက်ရောက်သွားတာတောင် ဆော်မသိလိုက်တော့ဘူး၊
ငတိလဲ လက်ခလယ်နဲ့ အသာအယာ အေါက်ထဲကိုအထုတ်အသွင်းလုပ်ပေးလိုက်တာ အားပါးပါးအရည်တွေကိုအိုင်ထွန်းသွားတာပဲဗျို့၊
သူ့လည်ပင်းအတင်းဖက်ထားတဲ့ ဆော်လက်တစ်ဖက်ကိုအသာဖြုတ်လို့ သူ့ငပဲပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်၊ ပထမတော့သူတင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ၊ နောက်သူ့လက်ပေါ်အသာအုပ်ပြီးရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လေးပြလိုက်မှ
အဆင်ပြေတော့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီကောင်ကပြီးမသွားဘူး၊ ရုပ်ရှင်ကပြီးနေပြီ၊ မီးတွေလဲထွန်လိုက်ရော ဒီကောင်လဲပုဆိုးပြန်ပြင်ဝတ်၊ ဆော်ထမီပြန်ပြင်ဝတ်ဖို့လဲကာထားပေးရသေးတယ်၊
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဖင်မှာနဲတဲ့အကွက်ကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့၊ အရည်တွေအိုင်ထွန်းထားတာ၊ ထမီမို့တော်သေးတာပေါ့ လှည့်ဝတ်လို့ရသေးလို့၊
ရုပ်ရှင်ပြီးတော့အစောကြီးရှိသေးတယ်၊ ဒီကောင်လဲမပြီးသေးတော့ဆက်ကြောင်းချင်နေတယ်၊ ဒါနဲ့စည်းရုံးလိုက်တာတည်းခိုခန်းရောက်ကြရောဆိုပါတော့။
တည်းခိုခန်းရောက်တော့သိပ်ကြောင်းနေစရာတော့မလိုတော့ဘူး၊ ရုပ်ရှင်ရုံမှာတော်တော်ခရီးရောက်ခဲ့ပြီကိုး၊ ငတိကမပြီးကလဲမပြီးသေး ကြမ်းကလဲကြမ်းချင်ဆိုတော့အကုန်ချွတ်ပြီးဗျင်းချင်တယ်၊
ပထမတော့ကစ်စင်ဆွဲတာပေါ့ မကြာဘူးတီရှပ်အောက်ကလက်ထည့်လို့နို့တွေနိုက်နေပြီ၊ ဆော်လဲမျက်လုံးတွေစင်းကျလို့ဖီးတွေတက်နေပြီ၊ အဲဒီတော့မှတီရှပ်ကိုခေါင်းကအသာဆွဲချွတ် ဘရာလေးပါတလက်စထဲ
ချွတ်လိုက်တော့အတော်ကိုခရီးရောက်သွားတာပေါ့၊ ဗဆ်ာပါးစပ်လေးထဲလက်ညှိုးထဲ့ နို့လေးနှစ်လုံးကိုအပြန်အလှန်စုတ်ပြီး ချက်နားအထိလျှာလေးနဲ့ဆွဲဆင်းလာတာဆော်ကိုကော့ပြီးပါလာတော့တာပဲ၊
ဒါနဲ့အောက်လဲနိုက်လိုက်ရောအရည်တောက်တောက်ကျနေပြီ၊ ထမီနဲ့ပင်တီဆွဲချွတ်တော့ဆော်ကခါးလေးတောင်ကော့ပေးလိုက်သေးတယ်၊ ငတိလဲသူ့အ၀တ်တွေအမြန်ချွတ်လို့ ရွှေဖွားတော်ကိုကျွိုင်စွတ်လို့
ဆော်ပေါင်နှစ်ချောင်အလယ်မှာထိုင်ရင်း ဗျင်းပါတော့တယ်၊ အစတော့လှေထိုးရိုးရိုး၊ နောက်ထန်လာတော့ ပုခုံးပေါ်သူ့ခြေနှစ်ချောင်းတင်ပြီး ကောင်မလေးပုခုံးကိုဆွဲလို့ကစ်တာ ဆယ်မိနစ်အတွင်း အရည်ဗလပိုင်နဲ့
အဆုံးတိုင်တော့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အားမရနိုင်သေးပဲ စိတ်တူကိုယ်တူနောက်သုံးကြောင်းအပြိုင်ကြောင်းပြီးမှပဲအိမ်ပြန်နိုင်ခဲ့ကြတယ်၊ ထူးဆန်းတာကဆော်ရဲ့သူငယ်ချင်းကိုတောင်ဗျင်းပြီ သူ့ဆော်ကျတော့မဗျင်းရသေးဘူး
နောက်ခြောက်လလောင်မှသူဆော်သူဆက်ဗျင်းတယ် လောလောဆယ်တော့ Playboy ပဲ ဆော်နှစ်ပွေကြားမှာလိန်နေလေရဲ့။
ဒါပေသည်. ဒီထဲမှာ အမှတ်ထင်ထင်ရှိတာကတော. ၂ ယောက် ၃ ယောက်ပါဘဲ
ပထမတယောက်ကတော.ချင်း ဇကွဲလေးပါ မန်းလေးမှာကျောင်းတက်တုန်းကပေါ.
မျက်နှာလးကချစ်စရာလေး အသားညိုစိမ်.စိမ်. ကိုယ်လုံးသွယ်သွယ်နဲ. ပိပိလေးကဖောင်းနေတာဘဲ ဖင်လေးကတော.သိပ်မကြီးဘူးဗျ အနေတော်လေးရယ် ဒါပေသည်.လုပ်ရတာတော.စေးနေတာဘဲ
နောက်တယောက်ကတော. ၄၀ကျော် တခုလပ် ရခိုင်ဗမာကပြားမမကြီးပါ သူကစာရင်းစစ်လေ
ကျွန်တော်စားဘူးသမျှထဲမှာတော.အကြိုက်ဆုံးဘဲဗျာ...ကလေး တကောင်ကျပြီးတာတောင် ပိပိကကြပ်နေတုန်းဗျာ
ပုံစံကလား အရပ်နဲနဲပုတယ်ဗျ အသားကညိုညက်ညက် မျက်နှာကတော.လှတယ်ပြောရမှာပေါ.ဗျာ ဘဲဥပုံမျက်နှာနဲ. မျက်လုံးတွေက ခပ်ရွဲရွဲ နဲ. ဆာနေတဲ.မျက်လုံးတွေဗျို. သူ.မျက်လုံးကြည်.မိရင် တခါထဲ အငယ်ကောင်ပါနိုးပြီးသား :lol: :lol: ကျွန်တော်နဲ.ငြိသွားတာလဲ အဲဒီမျက်လုံးတွေကြောင်.ဘဲ နှုတ်ခမ်းကတော. ထူထူလေးဗျ ချစ်စရာလေး (အောက်နှုတ်ခမ်းကလည်းထူထူပါဘဲ အစေ.ကြီးဆိုအကြီးကြီး :mrgreen: )
ကျွန်တော.အကြိုက်ကတော. သူ.အိုးကြီးပေါ.ဗျာ အိုးကြီးကဘေးကိုကားနေတဲ.အပြင် နောက်ကိုပါစူထွက်နေတာဗျို.(ကြည်လဲ.လဲဦးအိုးလိုပေါ. ဒါပေသည်.အဲလောက်တော.မကြီးပါ)
ဖင်ကြီးကကြီးတော. ကုန်းချရင် ကျွန်တော်လည်းဖီးလာပြီး ခဏ ခဏအမြန်ပြီးတော.ဆော်ကြီးက နောက်ပိုင်းမကုန်းပေးတော.ဘူးဗျာ
လှေကြီးထိုးရိုးရိုးလုပ်ဆိုတာချည်းဘဲ ...ဆိုတော.ကျွန်တော်လည်း အာရုံလွှဲပြီး ကြာကြာလုပ်ပေးပြီး ပြီးခါနီးမှ ချော.ပြီးကုန်းခိုင်းရတယ်
အစေ.ကြီးကလည်းအကြီးကြီး နို.ကတော.ကလေးအမေဆိုတော. နို.သီးခေါင်းတွေမဲနေတာပေါ.ဗျာ နို.အုံကတော.အနေတော်ပါ မသေးမကြီးပဲ
သူနဲ.ငြိတာက ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တုန်းက တရပ်ကွက်ထဲပေါ.ဗျာ အိမ်ချင်းလည်းနီးတယ် သူတို.က သားအမိ၂ယောက်ထဲ(သူရယ် သူ.ရဲ.၈နှစ်အရွယ်သမီးလေးရယ်)နေကြတာလေ ကျွန်တော်က အကူအညီလိုရင်သွားသွားလုပ်ပေးရင်းနဲ. ညိသွားရောဆိုပါတော. :mrgreen:
ဆော်ကြီးကအပေးလည်း ဘာကောင်းသလဲမမေးနဲ.ဗျာ ကျွန်တော်နဲ.ဖြစ်ပြီး သူတို.အိမ် ညတိုင်းသွားဖြစ်တယ်
ကလေးအိပ်ပြီဆိုတာနဲ. တွယ်ကြတော.တာဘဲ...ကျွန်တော်က မ စလည်း သူကစတာဘဲဗျ...ရာသီလာတဲ.နေ.တွေကလွဲလို. နေ.တိုင်းနီးပါးတွယ်ဖြစ်တယ်
နောက် ကျွန်တော် အပြင်ထွက်လာမှ ပြတ်တော.တာဘဲ
တခြားစားဘူးတာတွေကတော. ဗမာ(ကျွန်တော်လည်းဗမာနော်) နဲ. ရှမ်း နဲ. တရုတ်ဘဲ
စားချင်နေတာတွေကတော. မဂိုကုလားမ ကရင်မနဲ. မွန်မတွေဘဲ
ကျွန်တော်စလုံးမှာ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်...ပထမဆုံးရီးစားကတော့ ဖားမပါ... ဘော်ဒါ တစ်ယောက်က မိတ်ဆက်ပေးလို့ ရင်းနီးပြီး ဖုန်းတွေပြောဖြစ်ပါတယ်... နောက်တော့ ကျွန်တော်လည်း ဟော်တယ် ၈၁ ကို ခေါ်ပြီးတီးလိုက်ပါတယ်...ကျွန်တော်ကြိုက်တာက သူ့နို့တွေပါ..အကြီးကြီးတွေ...နာမည်က kim တဲ့..ကျွန်တော်အဲနေ့က သုံးချီသုံးမောင်းဆွဲလိုက်ပါတယ်... ကျွန်တော်ရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် ဆော်ကို ခေါ်ပြီး စားဘူးတာပါ...ကြောက်ကလည်းကြောက်ကြေက်နဲ့... ကျွန်တော်သာသုံးကြိမ်ပြီးသွားတာ..သူကတော့ အောက်က မက်စ်ဆေ့စ် အရိုက်မပျက်ဘူး သူ့ဘော်ဒါတွေနဲ့.... အဲဒါပြီးတော့ ဖြတ်လိုက်တယ် ကလေးအမေဖြစ်နေမှာစိုးလို့...
အဲဒါပြီးတော့ ကျွန်တော့်ဆော် စလုံးကိုအလည်လာတယ်(မြန်မာမ)်..ဟဲဟဲ...
ရောက်ပြီးနောက်နေ့ပဲ ကိုယ်အခန်းလိုက်ပြမယ်ဆိုပြီး...တီးထည့်လိုက်တယ်.. ၃ ၄ ခါလောက်..အဲဒီမှာသိလိုက်တယ်..သူက တော်တော်အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားကြီး...စလုံးမှာ ၂ လောက်နေသွားတာ..နေ့တိုင်းနီးပါး အိမ်ခေါ်ပြီးဆွဲလိုက်တာ...သူ့ကိုတော့ ကျွန်တော်ချရတာတော်တော် သဘောကျတယ်.. တော်တော်အပေးကောင်းတယ်....နောက်သူပြန်သွားပြီး ကျွန်တော်လည်းဖြတ်လိုက်တယ်...
ဒီအထဲမှာ မွတ်ဆလင်တွေပါရင် ကြိုပြီးတောင်းပန်တယ်ဗျာ...
မလေးမရဲ့ စောက်ဖုတ်ကိုတော့ ကျွန်တော် တော်တော်ကြိုက်တယ်.. ဖောင်းပြီး နှစ်ခမ်းသားတွေက တွဲမနေဘူးဗျာ..အရင်ဆော်တောင် နှစ်ခမ်းသားတွေက မဲပြီး နည်းနည်းလန်နေပြီ.... သူ့ကိုဖုတ်ဖို့ ကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားတယ်...သူကအဖုတ်ခံဘူးဗျ...နောက်ဆုံးမပြတ်ခင်တစ်ခါတော့ ကျွန်တော့်ကိုကျွေးသွားတယ်.. တော်တော်စီးတယ်ဗျာ...ဖုတ်ရတာတော်တော်မိုက်တယ်..ဖုတ်ဖုတ်ကြီးကအယ်နေတာ.... နောက်သူက ကျွန်တော့်ကို သူ့ဘာသာထဲသွင်းဘို့ကြိုးစားရော... အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း လက်ရှောင်လိုက်တယ်...ဟဲဟဲ..
သူနဲ့ပြတ်ပြီးတော့ မြန်မာမလေးတစ်ယောက်နဲ့ ဆက်ဖြစ်တယ်.. စလုံးမှာကျောင်းတက်နေတာ...
အဲတုန်းက သူ့အသက်က ၁၉ ပဲရှိသေးတာ.... အိုးကတော့ကောင်းတယ်ဗျ... နည်းတာကြီးမဟုတ်ဘူး...
သူ့ကိုမှ ကျွန်တော်က လက်လံရတာ..တော်တော်ထန်တယ် ကောင်မလေးက.... ဖြစ်ချင်တော့ သူ့အိမ်နဲ့ ကျွန်တော့အိမ်က နီးနီးလေး.. ကား ၄ ၅ မှတ်တိုင်ရောက်ရော... အဲဒါနဲ့ ဘယ်ပြောကောင်းမလည်း အလုပ်ပြီးတိုင်း သူ့ကို အိမ်ခေါ်ခေါ်ပြီးတွဲတာ....၂ လောက်တော့ ဆွဲလိုက်ရတယ်...လူလည်း တော်တော်ကျသွားတယ်ဗျ ကျွန်တော့်ကိုပြောတာ.. သူက ဖင်ကောင်းတော့ လေးဘက်ထောက်ပြီးဆွဲရတာကို သိပ်ကြိုက်တာ..မမေ့သေးဘူး သူ့ဖင်ကြီးကို...နောက်ဆုံး ကျွန်တော်ဘယ်လောက်တောင် ဆွဲခဲ့လည်းဆို လီးထဲက သွေးလိုက်လာလို့ ကျွန်တော် တော်တော်လန့်သွားတယ်...ဆရာဝန်စီသွားရမှာလည်းရှက်..အဲဒါနဲ့ လီးထဲကို ဆရာခို ဆေးတွေ ရအောင်ထည့်ပြီးလိမ်းခဲ့ရတယ်ဗျာ.... နောက်ဆုံးတစ်ယောက်အကြောင်းတော့မပြောတော့ပါဘူးဗျာ..သူက လက်ရှိတွဲနေတဲ့ဆော်.. တစ်ကယ်လည်းယူမှာဆိုတော့...
ဘာရယ်တော့လဲမဟုတ်ပါဘူး ပြောပြချင်ယုံသက်သက်ပါ အဲ့တုန်းကဘယ်လောက်ညံခဲ့လဲဆိုတာကိုလေ
ကျွန်တော် ပထမနှစ်ထိ တစ်ကယ် ကလေးစိတ်ပါပဲ..တစ်ကယ်ပြောတာပါ..အဲက စတယ်ဆိုပါတော့ ကျွန်တော်လဲuni စတက်ခါစကတော့
တနေ့လဲကြကော ကျွန်တော့်ဟမ်းဖုန်းကို msg ၀င်လာတယ် "bar lote nay lel KOKO, I'm Sandy" ဆိုပြီး ကျွန်တော်လဲအစကတော့ကြောင်သွားတာပေါ့..ဒါပေမယ့်လဲ ဖုန်းမှားပို့တာပဲဆိုပြီး ပြန်မပို့ဘူး အဲ့မှာစတာပဲ သူကဖုန်းဆက်တယ် ဘာလို့ msg ပြန်မပို့တာလဲတဲ့..ကျွန်တော်က သူအသံလဲကြားကော ကျွန်တော်က ဖုန်းမှားနေတယ်ထင်တယ်လို့ ယူက ဘယ်သူ့ဆီပို့တာလဲမေးတော့ သူက မင်းမင်းဆီတဲ့ ကျွန်တော်က အဲဒါနဲ့ပဲ ဒီဖုန်းပိုင်ရှင်က မင်းမင်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ ကျွန်တော်နာမည် ရဲကျော်ပါလို့လဲပြောလိုက်တယ် ပြီးတော့
ကျွန်တော်ကလဲ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် မင်းမင်းဆိုတာက ယူ့ရီးစားလားဟင် လို့ သွားမေးမိတယ် အဲ့မှာ သူက ဟုတ်ဘူးတဲ့ ရဲကျော်ကမှ ငါရီးစားတဲ့
အဲ့တုန်းကတော့ ကလေးစိတ်ဆိုတော့ တစ်မျိုးကြီးပဲ ကြောက်သလိုလို ဘာလိုလိုပေါ့ ပြီးတော့ သူက ပြောတယ် သူနေမကောင်းဘူးဘာဘူးပေါ့ သူဘေးမှာလဲတစ်ယောက်မှမရှိဘူးပေါ့ အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ အားပေးရင်းနဲ့ သူနဲ့ခင်သွားတာပေါ့..
အဲ့ဆော်က ကျွန်တော်ကို ညဘက် တွေလဲ ဖုန်းဆက် အချိန်တိုင်းဖုန်းဆက်နေတာပဲ အဲ့တုန်းက ကျွန်တော်က အဲ့တုန်းကမှ ၁၆ သူက ၂၂ အဲ့လောက်ကွာတယ်(ကြားထဲက ဖုန်းပြောတာတွေတော့ မပြောတော့ပါဘူး )
အဲလိုနဲ့ တစ်နေ့လဲကြကော ကျွန်တော်က တွေ့ဖို့ချိန်းလိုက်ပါရော ကျွန်တော် first term ဖြေပြီးတဲ့နေ့ကပေါ့ ပြီးတော့ သူနဲ့ကျွန်တော်Coffee Aroma မှာတွေ့ကြည်တယ်မြေနီကုန်းကပေါ့.သွားလဲတွေ့ကော အကိတ်ကြီးဗျာ Aroma မှာ ထိုင်နေတဲ့ဘဲတွေ အကုန်ဝိုင်းကြည့်
နေကြတာ ကျွန်တော်က အဲ့တုန်းက Rapper ပုံလေးနဲ့ ကလေးပုံစံနဲ့သွားတာ သူမှန်းလဲမသိဘူး အဲ့မှာလဲ မိန်းခလေးဆိုလို့ သူပဲရှိတယ်လေ အဲဒါနဲ့ sandy လားမေးတော့ ဟုတ်တယ်တဲ့ အဲဒါနဲ့ကျွန်တော်ထဲ ထိုင်လိုက်ကော ဘဲတွေက ကျွန်တော်ကို ထူးဆန်းတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပါလေရော...
အဲဒါနဲ့သူနဲ့ကျွန်တော် Aroma ကလဲ ထကော Zoo ကို သွားတယ် အဲမှာထဲက ဇာတ်လမ်းက စပါလေရော zoo လဲရောက်ကော သူက ကျွန်တော်လက်ကို ဘလိုင်းကြီးထကိုင်ပါလေရော..(အဲပြောဖို့မေ့သွားလို့ အဲ့ဆော်ကြီးက နို့ကြီးတွေကလဲ ကြီးပြီးဖွေးနေတာပဲဗျာ..ဖင်ကြီးကလဲ အယ်နေတာပဲ ရေလည်ကိုလန်းတာ) အဲ့ပြီးတော့ Zoo ထဲမှာ သူ့နဲ့ကျွန်တော်က အတွဲတွေလိုပေါ့..အလိုနဲ့လဲပြီးကော စိမ်းလဲ စိုပြေကို ထပ်သွားတယ် စိမ်းလန်းစိုပြေ မှာ စကားတွေပြောကြတာပေါ့..အဲလိုနဲ့ ညနေလောက်လဲကြကော သူကပြောတယ် သူခေါင်းတွေမူးတယ်တဲ့ တစ်နေရာရာမှာနားချင်တယ်တဲ့ ကျွန်တော်လဲသိဘူးလေ အဲ့တုန်းက အဲ့အထာတွေကို အဲ့တော့ ကျွန်တော်ကလဲ ပြန်ပြောလိုက် ခေါင်းမူးနေရင် အိမ်ပြန်တော့လေဆိုပြီး ဟီးဟီး သူတင်းတွားတယ် အင်းပြန်မယ် ဒါဆိုလဲ လိုက်ပို့ဆိုပြီး အဲ့က ထ တက်စ်စီ ဌားပြီးတော့ သူအိမ်ကိုပြန်လိုက်ပို့ရော...Taxi ပေါ်လဲ ရောက်ကော သူက ကျွန်တော် ပခုံးပေါ်ခေါင်းလေ မှီပြီး အိပ်လိုက်ပါလေရော အပေါ်စီးကနေကြည့်ရတာ နိုးနှစ်လုံးက ပြူးပြီးဖွေးနေတာပဲ အဲ့တုန်းက ဆို တောင်ချက်က မြင်မကောင်းဘူး ဘောင်းဘီကြီးဆို ဖောင်းနေတာပဲ သူလဲမြင်တယ်ထင်ပါတယ်....တစ်လမ်းလုံးအဲ့တိုင်းပဲ
သူအိမ်နားလဲရောက်ကော သူက ဆက်ပြောတယ် အိမ်ပေါ်လိုက် ကော်ဖီလိုက်သောက်ပါလားတဲ့ အိမ်မှာ ဘူမှမရှိဘူးတဲ့...
အဲ့တုန်းက ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာ ကွန်ဒူံးဆိုတာလဲ သိဘူး..ဆော်လဲ မလုပ်ရဲဘူး..တစ်ကယ်ကိုကြောက်တာပါ အဲဒါနဲ့သူကို ထပ်ပြီးပြောလိုက်တယ်
မလိုက်တော့ပါဘူး အိမ်ပြန်နောက်ကျရင် မာမီဆူမယ်ဆိုပြီးတော့ ဆိုပြီး သူကိုချပေးပြီး အဲ့ Taxi နဲ့ ပြန်လာတော့ taxi သမားကပြောတယ် ညီလေးကံကောင်းတယ်တဲ့ သူ့ပုံစံက ကြိုက်ကုန်းကြီးတဲ့...အဲ့နောက်ပိုင်းက စပြီး အဲ့ဆော်ဆီ ဖုန်းဆက်တာ သိပ်ပြီးတော့ အရင်ကလို စကားမပြောတော့ဘူး ကျွန်တော်လဲ နောက်ပိုင်းကြတော့ ဆော်ရတော့ သူဆီမဆက်ဖြစ်တော့ဘူး နောက်ဆုံးဆက်တော့ သူကပြောတယ် ဒီဖုန်းကိုမဆက်နဲ့တော့တဲ့ သူမလေးရှား သွားတော့မယ်ဆိုပြီး...
ကျွန်တော် ဘ၀ က ကံကောင်းတယ်ပဲ ပြောရမလား ဆောက်သုံးမကျဘူးပဲပြောရမလား တစ်ခုခုပဲ အဲ့တုန်းကသာ အဲ့ဆော်နဲ့ဖြစ်ခဲ့ရင်လဲ ကွိုင်တော့ စွပ်မိမှာမဟုတ်ဘူး အဲ့တော့ ဒီချိန်လောက်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်လဲ လူလောကမှာ မရှိနိုင်လောက်ဘူးထင်တယ်
တစ်ခါမှတော့ မရေးဖူးတော့ ဖတ်ရတာ အဆင်မပြေရင် ဆော်ရီးပါနော် မျှဝေကြည့်တာပါ ကို့အတွေ့အကြုံကို
ဒုတိယနှစ်လဲရောက်ကော အတွေအကြုံတွေများလာတယ် ဆော်ဖိတယ် ဘီယာသောက် ဘော်ဘော်တွေနဲ့ပေါင်းပြီး အကုန်လုပ်တတ်သွားတယ်
အခုချိန်မှားအဲ့လို ဆော်မျိုးပြန်တွေ့လို့ကတော့ ကွိုင်တစ်ဒါဇင်လောက်ဝယ်ပြီးတော့ ပ၀ါ မကူရေမရှူကြေးပဲ ဟီးဟီး
ကျတော် အသက် ၂၀ ၀န်းကျင်လောက်က ပေါ့ ကက ခခ အမ်းကုန်း ဆိုတာ နားမလည်သေးတဲ့အချိန် တကယ်ကို နားမလည်တာပါ ကက ကိုကြိုက်ကုန်းဆိုတာလောက်တော့ သိတယ် ကျန်တာမသိသေးတဲ့ အချိန်ပေါ့ဗျ ပြောရမှာတော့ ရှက်တယ် လူပျိုရည်မပျက်သေးဘူး စော်မချဘူးသေးဘူးပေါ့ဗျာ အဲ့အချိန်မှာ အွန်လိုင်းမှာ မ နဲ့ စတွေ့ခဲ့တယ် မ က အဲ့တုန်းက အသက် ၃၂ ဗျ ၃၂ ဆိုလို့ အိုနေပြီမထင်နဲ့ အသားက ဖြူဖွေးနေတာပဲ ဆံပင်က ဆေးဆိုးထားတယ် နိုင်ငံခြား အဲလိုင်းမှာ လေယာဉ်မယ် လုပ်နေတာလေ အရပ်က မြင့်မြင့် ရုပ်ကို မှန်းကြည့် ကြပေါ့ဗျာ အွန်လိုင်းမှာ တွေ့တယ် စတုန်းက တော့ အမ မောင်လေး ဆိုပြီး ပြောကြတာ တော်တော်ကြာတယ် ခင်လာတယ် နောက် ကျတော် က သင်္ကြန်ကြီး ညဖက် အွန်လိုင်းမှာ မူးမူး နဲ့ သူ့ကို ရည်းစား စကားပြောလိုက်တယ် သူကလည်း ကျတော် သူ့ကို ချစ်တာ သူသိနေပါတယ် တဲ့ ဘာညာ ပြောပြီး အဖြေရတယ် ဗျာ အဖြေရပြီးနောက် ပိုင်း vzo ပြောတော့ ကျတော်က ရုပ်မချောတော့ ကင်မရမဖွင့်ရဲဘူး သူပစ်သွားမှာ ကြောက်တာပေါ့ သူ့ကို ကျတော်က တကယ်ကြွေသွားတာကို ဒါတွေထားပါ ချုပ်ပြောမယ် သူရန်ကုန်ကို လာတယ်ဗျာ ကျတော်နဲ့ ရန်ကင်းစင်တာမှာ ဒိတ်တယ် တွေ့တယ် စကားပြော ကော်ဖီ သောက်ပြီး သူက ကိစ္စ ရှိလို့ဆိုပြီး ပြန်သွားတယ် ကျတော်ထင်လိုက်တာ ဒီစော် ကျတော့်ကို မကြိုက်လို့ ချက်ချင်း ပြန်သွားတယ်ပေါ့ ည ရောက်တော့ အိမ်အောက်က ဖုန်းကို ဆက်လာတယ် သူ့အိမ်ကို မနက်ဖြန် လာခဲ့ဆိုပြီး ဘယ်သူမှ မရှိဘူးတဲ့ ခန ဖြစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါဆိုလို့ သွားတယ် မနက် ပိုင်း ရောက်သွားတယ် သူ့အိမ်က ကွန်ဒို ဆိုတော့ အောက်က ၀န်ထမ်းတွေက ရစ်တယ်ဗျ ကျတော်လည်း သူ့အိမ်ပေါ်ရောက်တော့ လူက တင်းနေပြီ အောက်က ရစ်လိုက်လို့ သူ့ကို ကျတော်က အခွေလာပေးတာ မ selection လုပ်ထားတာ သူ့အတွက် ပြီးတော့ ကျတော်က ပြန်မယ်လည်းလုပ်ရော ဧည့်ခန်းမှာနော် ကျတော့် ပုဆိုးကို ဆွဲချွတ်လိုက်ရော လူက သူနဲ့ဖက်ထားနမ်းထားတာ လူငယ်လည်းဖြစ်နေတာဆိုတော့ ဒုတ်က မတ်နေတာပဲ အဲ့မှာ သူက လာပါ အိပ်ခန်းထဲသွားမယ်ဆိုပြီး ခေါ်ရော အဲ့မှာ တနေကုန် မပြန်ဖြစ်တော့ဘူး ဖုတ်လိုက်နားလိုက် ထမင်းစားလိုက် ဖုတ်လိုက် ကော်ဖီ သောက်လိုက် ရေချိုးလိုက် ဖုတ်လိုက်ပေါ့ဗျာ နောက် ကျတော့် အတွက်ဆို မုန့်ဖိုး တခါပေးရင် ၃ ၄ ၅ သောင်း အနည်းဆုံးပဲ အ၀တ်အစား ၀ယ်ပေးတယ် ကျတော့်အိမ်က ရေခဲသေတ္တာ ထဲမှာ ကျတော်ကြိုက်တဲ့ အအေးဘူး အစုံအပြည့်ထည့်ပေးတယ် ကြက်ဥ တကဒ် နွားနို့ ၅၀ သားကတော့ အမြဲပါတယ် သင်တန်းတက်ဖို့ ဆို ၁ သိန်း အဲ့လိုတွေပေးတာဗျ နောက်တခေါက် ရန်ကုန် ပြန်လာတယ် နိုကီရာ တလုံးဝယ်ပေးတယ် သူနဲ့တွေ့တဲ့ အချိန်မှာ ရသလောက်ကို တော့ ဖုတ်ပစ်ကြတယ် ဖုတ်လို့ရသလောက် နောက် သိပ်မကြာဘူး သူကျတော့်ကို လျှော် တာပါပဲဗျာ ကျတော်သာ တကယ် ကြွေပြီးး ခုထိ သတိရနေတုန်းပဲ နောက်တယောက်နဲ့ များငါ့လိုဖြစ်နေပြီလားဆိုတဲ့ အသိကလည်း ကျတော့်ကို တော်တော် ခြောက်လှန့်နေတယ် ကျတော် သူ့ကို တကယ် ချစ်မိသွားတာဗျာ နောက်ပိုင်းမှ နားလည်လာတာ သူက အမ်းကုန်း ပါလားလို့ အမ်းကုန်းမှန်းသိတဲ့ အချိန်မှာ ကျတော် သူ့ကို တကယ် ချစ်မိသွားပြီဗျာ ခုချိန်ပြန်ရမယ်ဆို ပြန်လိုချင်တယ် ယူဆိုယူမယ် အဲ့လောက်ထိ ချစ်သွားတာ (ကျေးဇူးပြုပြီးသူ့အကောင့်မတောင်းကြပါနဲ့ ကျတော်ပေးမှာမဟုတ်ပါ)သူခု ကျတော့်ကို ဘလော့တောင် လုပ်သွားပြီ vzo မှာတွေ့တယ် ခေါ်လည်းမကိုင်ဘူး စာရိုက်လည်း မပြန်ဘူးး ရေးတုန်းကတော့ sex ကိစ္စရော အမ်းတဲ့ ကိစ္စရော ရေးတာပဲ ဘယ်က ခံစားချက်တွေပါလာလည်းမသိဘူး ဟီးး သူငယ်ချင်းတုိ့ အတွေ့အကြုံတွေလည်း ရှဲ ကြပါဦး
ကျွန်တော်လည်း..ငါးကြော်ကြိုက်ပေမဲ့ မစားရဲလို့ ကြောင်မိုက်ဖြစ်ခဲ့ရဘူးပါတယ်..။
အဆင့်ရောက်တယ်..။ အဲ့မှာဒုက္ခစဖြစ်တာပဲ...။ ချက်တင်မှာကြူပြီး....
ထင်ပြီး..ဖုတ်ဖို့လုပ်တာ...။ တက်တက်စင်လွဲပါလေရော...။ ဆော်က
အပျိုမှေးကခံနေမှန်းသိတော့တယ်..။ ကျွန်တော့်မှာက..အိမ်ထောင်နဲ့...။ သူ့ကို
နောက်ဆုံးတော့..ငါးကြော်ကြိုက်ပေမဲ့ မစားရဲလို့ ကျွန်တော်ကြောင်မိုက်ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်..။
ဆက်ပါဦးမည် အခန်းဆက်များ မျှော်
Posted by okkala net at 2:31 AM
Thu Rein April 18, 2016 at 1:38 AM